Hemp Gweta - USDA Hemp Kuenderana & Bhizinesi Zano reHemp Cos
Hemp Magweta Vanobatsira Varimi
Hemp magweta, Tom Howard uye Rod Kight kukurukura nyaya dzebhizimusi dzakatarisana nevarimi veHemp, nepo Gweta Jeff Hall anotsanangura zvakashata zvepasi rose zvekuvhiringidzwa kwemutemo nezve bhizinesi reHemp.
Kana iwe uchida kutanga kana kuchengetedza bhizinesi rako re cannabis, iwe unofanirwa kubvunza a gweta rehemp pamusoro pezvingaitika zviito nemirairo. Mitemo yakasiyana inoshanda mune dzakasiyana siyana kuUS, uye yakanaka hemp Gweta inogona kukubatsira iwe kutevedzera mirau uye chengeta rako re cannabis bhizinesi rakachengeteka. Hezvino zvinhu izvo iyo chaiyo hemp Gweta inogona kubatsira iwe.
Hemp Chibvumirano Kudhinda uye Ongororo
Paunotanga bhizinesi ye cannabis, kunyangwe mu hemp, pane zvibvumirano zvakati kuti zvaunofanirwa kuita. Kutsanangura chinzvimbo chako mubhizimisi re cannabis ndiko kwakanyanya kukosha. Kunyangwe iwe uchida kuve processor, grower, kana mutengesi, iwe unofanirwa kuziva izvo kodzero dzako nezvisungo zviri mune yakatarwa nyaya. Gweta rehemp rinogona kukubatsira kunyora chibvumirano chakakodzera chinoshanda kune chako chaicho chinzvimbo.
Zvibvumirano pakati pevaridzi vebhizinesi rehemp rinofanirwa kunge riine zvakasiyana nezvimiro mubhizinesi. Unoda chibvumirano kana ukaronga ku:
• Tenga kana kutengesa hemp kana hemp zvigadzirwa
• Tenga kana kutengesa bhizinesi kana bhizinesi zvivakwa
• Ita chibvumirano chekudyidzana kwebhizinesi
• Ita chibvumirano chekurenda
• Ita chibvumirano chekugadzirisa hemp
• Ita chibvumirano chekupokana kunosanganisira mari uye kodzero dzemunhu
Kune akawanda akawanda marudzi amatare ezvibvumirano aunokwanisa kuita pakati pemapato nemapato ehemp anogona kukubatsira kunyora, kuongorora, kana kutaurirana chibvumirano chakakodzera icho chinoshanda kune rako bhizinesi. Kunyora chibvumirano kwakakomba zvakanyanya mukudyidzana kwebhizinesi nekuti iwe unogona kuzvidzivirira kubva mumamiriro ezvinhu apo rimwe bato risingateedzere zvibvumirano.
Kubata ruoko kana chibvumirano chomuromo hakugone kukuchengetedza iwe uchienzanisa nenzira iyo chibvumirano chakanyorwa chinogona kuchengetedza kodzero dzako.
USDA Hemp Regulatory Kuenderana
Dhipatimendi rekurima reUnited States (USDA) rakaburitsa zvakatemerwa zviri pamutemo neChina, Gumiguru 31, 2019. Mune iyi mirairo, iyo US Domestic Hemp Production Chirongwa inoshanda pamwe nehukwikwidzi hunobata kugadzirwa kwehemp. Iyo yepamberi mirairo inoonekwa semukana wekuvandudza kugadzirwa uye kutengeswa kwepamba hemp, iyo inogona kubatsira vese maUS kugadzira uye vatengi. Nyika neIndia madzinza vachange vane masimba ekutanga mukati mechirongwa chakatenderwa cheUSA.
Sechikamu chemitemo yenguva pfupi, tinokwanisa kuona zvinonyanya kunetseka zvinogadzirisa zvinotevera:
• Kuwanikwa kwembeu zvichienderana nenzvimbo, terroir, uye nemamiriro ese ekudyara
• Yese iyo yakazara THC midhiya yemitemo inoshanda kune ese THC uye THCA kutarisana
• Kuedzwa mune rakanyoreswa maLebhu anoenderana neDrug Enforcing Administration (DEA)
Mukati memirairo iyi, iyo nyika uye madzinza anogona kuendesa chirongwa chinotarisa uye chinotungamira hemp kugadzirwa. Izvo zvinodikanwa zvakakosha zvezvirongwa zvehurumende zvinofanirwa kusanganisira kugovera uye kuunganidza ruzivo, sampling uye kuyedzwa kwehuwandu hwehuwandu hweTHC, kuraswa kwezvirimwa zvisingaenderani, uye kusimbisa izvo zvinotarisisa kuti hemp iri kugadzirwa zvinoenderana nemitemo yepamberi.
Mibvunzo mizhinji inomuka kana zvasvika kune chaiwo mamiriro ehurumende, uye ndosaka gweta reHmp rinokupa iwe mirairo yakakodzera iyo inoshanda kune yako nyika. Izvo zvakakosha kuti tifunge nezve zvinhu zvese zvinoenderana nezvirongwa zveUSA mune imwe nzvimbo. Nenzira iyi, unozvidzivirira iwe nepfuma yako mubhangi re cannabis.
Nyika Hemp Kuenderana
The Zvakare 2018 Bhiri Bhiri's ndima yakachinja madudziro nezvirambidzo zvine chekuita nem maindasitiri hemp mirairo kubva zvakapfuura 2014 Farm Bhiri. Mune irimusi ra2018 Farm Bill, tinogona kuona kuti iwo mutemo unoshandura mitemo maererano nekukura uye kurimwa kwemaindasitiri hemp. Nekuda kweizvozvo, nyika uye madzinza anogona ikozvino kuendesa chirongwa uye chishandiso nezve kugadzirwa kwehemp munharaunda kana yedunhu wedzinza.
Chimwe Chinyorwa: Mashandiro Akaitwa nePurazi Bhiri Pamutemo Hemp… .uye Marijuana ???
Vagadziri vemitemo yenyika vanogona kugadzirisa nyaya dzakasiyana-siyana-kubva mukutsanangurwa kwehemp kusvika kune marezinesi, zvitupa, komisheni uye kodzero dzekuchengetedza. Anosvika makumi mana nemasere mapato ane mutemo wekuita zvirongwa zvekudyara kwemaindasitiri hemp nekurima.
Nzvimbo dzakatarwa dzinosanganisira Idaho, South Dakota, Mississippi, uye Dunhu reColumbia vachiri padanho rekuwana mvumo yakakwana yekurima hemp.
Mutemo Kusimbisa Dzidzo uye Kudzivirira
Muchiitiko chenyika yeIllinois, tinogona kuwona kuti iyo nyika inogadzirira sei kutevedzera mutemo mutsva wekumisikidza. Vakuru vakuru vanoti mutemo mutsva hausisiri pamabhuku, asi wave kushanda mune dzakawanda nzira dzakasiyana. Mudunhu reIllinois, munhu wese arikugadzirira kunyoresa mbanje pamutemo. Kukurudzira iyo mitsva mitemo kunoshandura zvachose maonero evazhinji varidzi vebhizinesi re cannabis.
Mamiriro ezvinhu akafanana akaitika kuColorado makore matanhatu apfuura apo varaidzo mbanje yakanyoreswa zviri pamutemo. Rimwe zuva, cannabis yakanga isiri pamutemo, uye yaitevera, yaive pamutemo nemirairo yepamutemo. Shanduko iyi yakabata nzvimbo zhinji dzehupenyu, kubva pakutyaira mirairo kune THC nhanho mirau. Nyika yeColorado ndiyo yaive yekutanga kuona zvinoshanda zvemutemo mutsva. Tichiri kukwanisa kuona vatyairi vari kutyaira vachimanikidzwa nembanje, ndiwo mumwe wemhedzisiro yemba mbanje.
Cannabis yave inowanikwa muColorado. Kuwanikwa mbanje kunobvumidzwa pasi pemamwe mamiriro. Nenzira yemigwagwa, tinogona kuona akawanda mapurogiramu ekushongedza anotsigirwa nemakambani echiputa. Mabhizinesi mazhinji anogadzirisa zvirongwa zvavo pakusimudzira nekushambadza kwezvakagadzirwa mbanje. Colorado ndiyo yekutanga semuenzaniso iyo iyo cannabis indasitiri inogona kuchinja mamiriro ebhizinesi mune imwe nyika.
Izvo zvinosara kuti uone kuti nderupi shanduko richaitika mudunhu reIllinois nedzimwe nyika dzinogadzirira kudzoreredza mbanje pamutemo. Zvinoenderana nekufungidzira chaiko, iyo huwandu huri pasi pemakumi matatu emagiramu e cannabis maruva ichave ari pamutemo munzvimbo zhinji dzeIllinois muna 30.
Iwo mutemo mutsva unogadzira uchagadzira mukana wekuvhurika musika wevatengesi vezvinodhaka nemabasa ematsotsi. Nekudaro, vagari vachayambirwa kutora zvigadzirwa zveTC chete kubva kuzvinyorwa zviri pamutemo. Izvi zvinogadzira mikana yakawanda yevaridzi vebhizinesi kugovera zviri pamutemo mbanje uye zvigadzirwa zve cannabis.
Panyaya yekuteerera zviri pamutemo, muridzi webhizinesi anofanira kutora matanho anodiwa kuchengetedza bhizinesi uye zvirongwa zvemari. Kutaura kune gweta rehemp kunogona kuwedzera zvakanyanya mikana yekuwana marezenisi akakodzera pasi pemitemo yenyika.
Bata Hemp Attorneys
Bata Gweta reHemp bhizinesi rako:
MuNorth Carolina - asi vachishumira vatengi ve hemp munyika yose pazvinhu zvehurumende - Gweta Rod Kight
MuI Illinois, uye zvakare vachishumira hemp vatengi pazvinhu zvehurumende nekubvunza nyika yese - Gweta Thomas Howard
Kubatira varidzi vebhizinesi rehupfumi vachipomerwa mhosva yekuputa mbanje - Gweta Jeff Hall.